Malunga nathi -iTai ngokuprinta kunye nokupakisha Co., Ltd.
I-Tai ekushicileleni nasekupakisheni Co., Ltd.
Inkampani ngokudibeneyo isekwe yi-Shanghai Anxin Packaging, uHenan Lufeng Packaging, iZhejiang Xinya Packaging, Jiangsu Shanyi Packaging, kunye neZhejiang Dazuo Packaging. Yinkampani evelisa kwaye ithengise uthotho lweemveliso zokuprinta kunye nokupakisha. Ukusukela ukuba inkampani nganye yemveliso ivelise uthotho lweemveliso, inkampani esekwe ngcono inokuba neemveliso ezibanzi ezinokulungelelanisa kunye nokusebenzela abathengi abatsha nabadala.
Iminyaka engama-30 yamava okuvelisa kwicandelo lokupakisha iphepha, sizibophelele ekuboneleleni ngesiphelo, uphawu olutsha lweebhokisi zokupakisha, sineqela elizimeleyo loyilo lwemveliso, sinikezela abathengi ngesikimu sokuyila esipheleleyo, njengendawo evuthiweyo, umgangatho sele yethu yokuqala kwaye kuphela komgangatho. Inkqubo yethu ye-Qc ibandakanya iQc, iPQc kunye neQA kunye nezinye iinkqubo zolawulo lomgangatho. Ngelo xesha linye, siye izixhobo imveliso phambili, kuquka wokuprinta, umatshini ukusika iphepha, die-ukusika umatshini, wokulaminetha umatshini, ngesantya esiphezulu umatshini ethe njo njalo njalo. Kunye umgca wemveliso oluzenzekelayo andsemi-oluzenzekelayo umgca manual, uyakwazi ukuhlangabezana neemfuno imveliso imveliso ezahlukeneyo. Kwaye sidlulile i-IS09001, i-FSC, i-GMl kunye nezinye izixhobo zeshishini, ngaxeshanye zinokubonelela ngemveliso yokupakisha indalo
Ikakhulu ivelisa ibhokisi yemibala eyahlukeneyo, iibhokisi zokupakisha izithambiso kunye nekhadibhodi enamakhonkco
unemigca emihlanu yekhadibhodi yokuvelisa umgca wekhadibhodi, ikhadibhodi ephezulu yokuchaza imibala emine, umatshini wokushicilela wangaphambi kwexesha eliphezulu, umatshini wokuprinta umbala we-Heidelberg 6, umatshini wokuzenzekelayo, ibhokisi yemibala eyenza kunye nomatshini wokuncamathisela. Veza zonke iintlobo zekhadibhodi ezitshixwayo, iibhokisi, iibhokisi ezinemibala, njl njl ukupakisha.
Umzi-mveliso unoomatshini bokushicilela abangaphandle abali-13, kubandakanya i-Heidelberg evule imibala-emihlanu, enemibala emihlanu, enemibala emithandathu, kunye no-7 + 1 UV nano oomatshini bokushicilela ababuya umva, abavelisa iibhokisi zemibala eyahlukeneyo, iibhegi zamaphepha kunye neebhegi zokupakisha zephepha. Izinto zokubhala ezahlukeneyo, njl.
I-2-layer ye-E-type kunye nohlobo lwe-F lwelayini eyenziwe ngemveliso kunye nezixhobo ezahlukeneyo ezisezantsi ezantsi, ikakhulu ezivelisa iibhokisi zangaphakathi zezithambiso, iikhadibhodi ezinemibala eyahlukeneyo kunye neebhokisi zephepha.
Umsebenzi wobugcisa kaZhejiang
Unomatshini wokuprinta umbala wombala we-5-umbala, umatshini wokusika ozenzekelayo, kunye nemigca emi-5 yemveliso yebhokisi yesipho. Ikakhulu zivelise iingxowa zezipho ezahlukeneyo kunye neebhokisi zezipho.
Ibhokisi yeZipho zeLamin, Ibhokisi yeZipho, Iibhokisi zezipho zezipho, Yenyuka ibhokisi Carton, Isipho sokuKhuthaza, Ingxowa yokukhuthaza,